ဖွတ်ကျား Myanmar My Ringtunes service | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Consumer Electronics » ဖွတ်ကျား Myanmar My Ringtunes service
ဖွတ်ကျား Myanmar My Ringtunes service
Posted by မုန်းအောင်ချစ် on Apr 2, 2012 in Consumer Electronics | 14 comments
တစ်လ 2000 ပေးပြီး ဆတ်ဆတ်ဆော့ဆော့လုပ်မိပါတယ်
လုပ်ပြီး 10ရက်လောက်နေတော့ သီချင်းသံပျောက်သွားရော
ခုတော့ သီချင်းသံမကြားရတာ 1လ ကျော်ပြီ
စိတ်မရှည်တာနဲ့ မသုံးချင်တော့ဘူးဗျာ ပိတ်ပေးပါတော့ဆိုပြီးအကြောင်းကြားထားတာ
ခုတော့ မပိတ်တဲ့ အပြင် 2000ကျပ်တိတိ တီကတဲဖြတ်ချသွားပြန်ရော
ဒါနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြောတော့လဲ ကြိုးစားပေးပါမယ်တဲ့..
ဆိုတော့ သူကကြိုးစားပေးမယ်သာပြောနေတာ မရရင် လစဉ် 2000ဖြတ်ခံနေရမှာလားဆိုတော့
၀န်ဆောင်မှု့မရပဲနဲ့ အလကားနေရင်း တစ်လ 2000 ဖြတ်နေမယ်ဆို ဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်
ခုတော့ လုပ်မိတဲ့ ကျွန်တော့ အမှားပါ
နောင်လာနောင်သားများ မမှားရအောင် အသိပေးပါ၏
Anaconda MMT has written5post in this Website..
View all posts by မုန်းအောင်ချစ် →
မှောင့်အပြစ်နဲ့မှောင်သာ ရှိပါစေတော့လေကွယ်
ဟုတ်ဘူးဗျ အဲတာ မှောင်ကိုယ်တိုင်မှားတာ
ကိုယ်လဲကြားရတာဟုတ်ပဲနဲ့ ..အထွန့် တက်ပြီးလုပ်တာလေ
ဟီး..ဟီး…။ ဒါတော့ မှောင့်ကိုအားနာနာနဲ့ပဲ ကိုဗိုက်ကလေးကို ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်…။ ဟုတ်တယ်လေ…။ ဟိုဘက်လူသာသာယာယာရှိအောင်ပဲ ကိုယ်က ၂၀၀၀ ကုန်ရတယ်။ ကိုယ်ကြားရတယ်ဆို တစ်မျိုးပေါ့…။ ဒါမျိုးတော့ လုပ်ဖို့ အစကတည်းက အစီအစဉ်မရှိပေါင်!
မှားတဲ့ အခါလဲ မှားပေမပေါ့ဗျာ…
ကျွန်တော်က တော့ ခေါ်တဲ့လူကို အဲဒီလို သီချင်းသံအေးအေး လေးနဲ့ ဖျော်ဖြေတာ ကောင်းတယ် လို့ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လိုလဲ ဆိုတော့ လူကြီးဒေါသ ထွက်ပြီး ကိုယ့်ကိုဆူ မလို့ခေါ်ရင် သီးချင်းသံလေးကြားရင် နဲနဲတော့ ဒေါသပြေသွားမယ်ထင်တယ်၊ အကြံကြီးတယ် ဟိဟိ………………..
အောင်မယ်လေး ဆူဆူညံညံသီချင်းသံထည့်ထားရင် သူမကိုင်မချင်းနားကိုအူနေတာပဲ။
အဲဒါ အမှန်ပဲ.. သူငယ်ချင်းဆီ ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင် သီချင်းသံ ကြားရတာ နားကို ငြီးနေတာပဲ.. သူ့ဆီ ဆက်တိုင်း အဲဒီ အဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်ရတာ တော်တော် အသည်းယားတယ်။ သီချင်း ပြောင်းပါ ပြောလည်းမပြောင်းဘူး။ အမြင်ကတ်လို့ သူ့ဖုန်းကို မခေါ်ဘူး အိမ်ဖုန်းခေါ်ပြီး မှာစရာ ရှိတာ မှာထားတယ် အဲလိုပဲ လုပ်တယ်။
ဖွ ဗျို့ ဖွ …. ၁၀၀%ထောက်ခံအားပေးနေတယ်…
ဘာမှ မောင့် အပြစ်မဟုတ်ဝူး….
ဟေ့ … ကတ်စတန်မာ ဆိုတာ ဘုရားကွ…အရှင်သခင်ကွ…
အိုက်ဒလို ပိုက်ပိုက် ယူပီး ၀န်ဆောင်မှု ၆တလွဲလုပ်တဲ့ကောင်ဒွေ……
မသေရင်တောင် … လုပ်စားမရလောက်အောင် နာမည်ပျက် …
ဖင်က အမြီးပေါက်သလိုကို ၆ရှက်ကွဲမှ အေးမယ်…….
၆၃မကျတဲ့ ဘစ်ဇနက်မော်ဒယ်ချပြပြီး လုပ်စားတဲ့ကောင်တွေ …
ရှိသေးတယ် မြန်မာမှာဒါမျိုးတွေအများကြီး နည်းပညာအကြောင်းပြစားနေတဲ့ တစ်နှပ်စားစောက်ကျိုးနဲပညာရှင်တွေလေ ….
ရွှေဂုံတိုင်က နာမည်ကြီး Laptop Service တစ်ခုမှာ ကျနော့် hp လေးဝင်းဒိုးမတက်တော့လို့သွားပြမိပါတယ်
မားသားဘောက်စ့်လဲရမယ် U$ 350 ကျမယ်တဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်အဲ့လောက်ပိုက်ဆံမရှိသေးတာနဲ့
နောက်မှပဲ ပြန်လာပြင်လိုက်ပါ့မယ်လို့ ပြောတော့ ဘောင်ချာတစ်ရွက်ထုတ်ပေးတယ်
Service Charges ၅၀၀၀ ကျပ်တဲ့ … သွားပြတဲ့အတိုင်းဘာမှမထူးပဲ ပြန်ပေးလိုက်တာကို
Service Charges ၅၀၀၀ ယူရလောက်အောင် ငတ်နေပီလားမသိပါဘူးဗျာ…….
အဲ့ဒါတော့ နည်းနည်းလွဲနေတယ် ကို ချစ်ရင်ထူးရေ…
အနည်းဆုံး သူက ခင်ဗျား လက်ပကျွတ် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့
ရောဂါ အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေးပေးတယ်လေဗျာ…
ကုတာ မကုတာ ခင်ဗျားအပိုင်း လေ…
သည်လိုမျိုး ဘယ်မှာ ဘာပျက်လို့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့
ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုအတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ အခကြေးငွေ
ပရို တယောက်အနေနဲ့ …သင်ယူခဲ့ရတဲ့ ပညာတွေ
သုံးရတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ..ကြာခဲ့တဲ့အချိန်တွေ အတွက်ပါ…
ချာတူးလန်ပါဟ မောင်ဂီရဲ့။ သများတောင်မျက်စိလည်သွားလို့ အပေါ်အောက် ၃ ခါလောက်ဆင်းကြည့်လိုက်ရတယ်။
ခုကိတ်စက သူတို့ဖက်က ချွတ်ယွင်းနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ
ကာစတန်မာကို လေးစားတဲ့ အနေနဲ့သူတို့တင်ထားတဲ့ websit မှာ
ဘာလို့လဲဆို.အဲ့လိုဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ မှမဟုတ်တာလေ
အမလေး ဗျာ မောင်တို့က ဒီက Service တွေကိုများ ရုံလို့ နေ ။ ကွန်နက်ရှင်ကိစ္စ ၊ ဖုန်းကိစ္စ ။ တွေဒီလောက် ခံလာတာ အမှတ်သေးဘူးကိုး ။ အဲလိုပဲ ဘာလုပ်ပေးမယ်ဘယ်လို ၀င်ဆောင်မှုပေးမယ် နဲ့ လေ၀န်ဆောင်မှု တွေ့ပဲ များနေတာကို အင်း ဒီလိုဆိုရင်တော့ စားဗစ် မဟုတ်ပဲ စားပစ် ဖြစ်နေတာပေါ့နော် ။
မြန်မာ ရိမ်းကျူး ဆားဗစ်မမှားဘူး သုံးမိတဲ့ကျွန်တော်တို.မှားတာ… မသိဘူးလို.ပြောနေတာကို သုံးဖြစ်အောင်သုံးမိတဲ့ ကျွန်တော်တို. အားလုံးမှားနေကြတာပါဗျာ..
ရေအဆုံး ကုန်း တဆုံးတဲ့..
ခင်ဗျားတို့က ယုံပြီး သွားကုန်းတာကိုး..